Maxay Dubai caan ugu tahay Soo-booqdayaasha Bariga Bariga Aasiya? | Shaqooyinka - Xirfadda - Safarka DCC
Soo-noqoshada jacaylka ee Tilal Liwa Resort
Waxaa la aaminsan yahay in ku dhowaad 16 Million dadka booqo Dubai sannad kasta - iyo tirada sii kordhaysa ee ka imaanaya wadamada Koofurta Aasiya sida Singapore iyo Thailand, waxaa habboon in la raadiyo sababta ay taasi tahay kiiskan. Laga soo bilaabo dukaamaysigeeda dukaamaysiga maraakiibta dukaamaysiga ah ee ay ka fogyihiin hawo-mareenada koonfurta Bari ee Aasiya, waxaa jira sababo badan oo keenaya Dubai waa meel aad u fiican.
Fursad aad ku bixiso
South East Asia waxay ku nool yihiin qaar ka mid ah dhaqaalaha ugu xiisaha badan adduunka, sida Vietnam iyo Thailand. Taasina waxay keentay, inay jiraan suuq aad u sarreeya oo shakhsiyadeed iyo dadka kale ee awoodda u leh, iyo dhammaantoodba waxay ku jiraan boodhadh si ay u dejiyaan lacagta. Dubai, iyada oo leh suuqyada waawayn ee dukaamada, waxay bixisaa fursad fantastik ah oo ay ku qurxiyaan alaabo qaali ah. Iyada oo laamo ka mid ah dukaamada sare ee galbeedka sida dukaanka alaabta lagu ciyaaro ee Hamley iyo dukaanka Bloomingdale ee laga heli karo magaca caanka ah ee Dubai Mall, waxaa jira rafcaan badan oo loogu talagalay kuwa raba in ay qaataan.
Booqashada fasaxa marwalba waa mid xiiso leh, laakiin waxaa jira faa'iidooyin iyo faa'idooyin gaar ah oo la xidhiidha nooc kasta oo ah fasax sameynta. Diyaarad meel u dhow ayaa hoos u dhigi karta jet lagana yareeyo waqtiga safarka, laakiin sidoo kale waxay yareyn kartaa heerka doorasho ee la heli karo. Qayb ka mid ah sababta Dubai ay u caan baxday safarada South East Asian waa in ay tahay meel fiican oo macaan ah oo u dhaxeysa dherer dheer iyo mid gaaban. Diyaarad toos ah oo ka timid Bangkok ilaa Dubai ayaa qaadatay wax ka badan lix saacadood, iyada oo Ho Chi Minh City ay ku leedahay Dubai todobaad kadib.
Waxaa jira shirkado badan oo kala duwan oo bixiya adeegyo waddooyinka ka dhexeeya magaalooyinka waawayn ee Koonfur Bari Asia iyo Dubai. Emirates, oo ah dayuurad qaran oo ka tirsan Dubai iyo meelaha kale ee Imaaraadka Carabta, ayaa maamula badan oo iyaga ka mid ah - laakiin Cathay Pacific, China Southern iyo kuwo kale sidoo kale waa la heli karaa si loo doorto. Inkastoo inta badan duulimaadyada waqtigooda ku haboon iyo sida loo qorsheeyay, waxaa haboon in la helo caymiska safarka naftaada ka ilaali dhacdooyinka aan la filaynin markaad safreyso, sida joojinta ama dhibaatooyinka gaadiidka.
Kala duwanaanshaha dhaqanka
Sidoo kale waa xaalada in ay jiraan dhaqamo kala duwan oo u dhaxeeya Koonfur Bari Asia iyo Dubai, sidoo kale. Qaar ka mid ah foomamka madadaalada, sida khamriga, ma aha kuwo aad u caan ah Koofurta Aasiya: Tusaale ahaan, Indoneesiya, waxay leedahay shey khamri oo aad u xaddidan sababtoo ah inta badan dadka Muslimiinta ah. Xaaladdani waxay hoos u dhacaysaa Dubai, sababtoo ah waxay ka soo horjeedaa sharciga si khamri loo cabbo qaybo ka mid ah dalka.
Dubai waxay leedahay ballan badan oo loogu talagalay qof kasta oo doonaya inuu soo booqdo, wax kastoo ka soo iibsanaaya dhaqanka ayaa halkan ku jira. Taas ayaa sharraxaysa sababta ay dadku u safreen si ay u soo booqdaan Awoodda Bariga Dhexe sanad walba, iyo sababta ay u badan tahay inay sii ahaan doonto caansanaan sanadaha soo socda.